မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: တဖက်သတ် နှစ်ပတ်လည်...
Thank you for sharing ma baydar.
ဟုတ်ပါ့.. ဆံပင်ကရှည်လွန်းတော့ မိန်းကလေးနဲ့ပိုတူလာတယ်။ နဂိုက နုနုဖတ်ဖတ် ပါးပါးလျလျမင်းသား သူ့ကိုကြည့်ရတာနဲ့တင် ကိုယ်ပါ အားမရှိချင်တော့ဘူး.. well-done, sis~!
&.. fighting, JKS!!
well done and thanks for sharing!!!
4/24/2011 9:44 PM
စာမဖတ်သေးဘဲ ဗီဒီယိုကလစ်ကလေးကို အရင်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ မိန်းခလေးများလို့။ စာဖတ်လိုက်မှ... ဟာ... ... အဲလို ဖြစ်သွားတယ်။း)))))
5/01/2011 3:09 AM
1/07/2012 11:52 AM